Ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID na-agba ọsọ ugbu a: nwere ike itinye ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihe egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID na-agba ọsọ ugbu a: nwere ike itinye ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihe egwu
A na-eme atụmatụ na enwere oghere inyefe ahịa zuru ụwa ọnụ nke ijeri 1.2 autodisable (AD) ngwaọrụ injection sirinji maka nnyefe ọgwụ mgbochi COVID-19. Ọdịiche a na-enye ihe ize ndụ ịghọ ihe mgbochi nke nwere ike ime ka nnyefe ọgwụ mgbochi n'oge na ọkara nke mba dị n'ụwa egwu.
Na Nọvemba 11, PATH na United Nations Children's Fund (UNICEF) mere Mgbakọ Global COVID-19 Vaccine Syringe Industry na-achịkọta ihe karịrị iri na abụọ nke ndị na-emepụta sirinji n'ụwa na ndị otu dị iche iche iji kwado nghọta na-abawanye na ahịa sirinji AD iji nyere aka. na-akwado inye ọgwụ mgbochi COVID-19 yana ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa oge niile. Ndị na-emepụta kwadoro ihe ịma aka sirinji AD zuru ụwa ọnụ site na njedebe nke 2021 ruo etiti 2022, n'agbanyeghị na ha na-emepụta na mbọ ha na-agba okpukpu atọ nke òtù dị iche iche iji nwetakwuo sirinji AD maka mba ndị dị ala na nke etiti na-achọ ha.
Mmụba a tụrụ anya na-achọ sirinji maka ọgwụ mgbochi COVID-19, nke e mere atụmatụ na ihe karịrị ijeri 4 site na njedebe nke 2021 ruo etiti 2022, bụ n'ihi mmụba a na-atụ anya ya na ọgwụ mgbochi COVID-19 na-ebuga mba ndị na-abịa site na COVAX. onyinye sitere n'aka gọọmentị, na nkwekọrịta abụọ. Dabere na ọkọnọ na data achọrọ zuru ụwa ọnụ, ihe ngosi PATH na-eme atụmatụ oghere zuru ụwa ọnụ nke sirinji 1.2 ijeri AD.
Ihe ize ndụ nke ịnyefe sirinji dị ka mmachi mbupụ mba, igbu oge mbupu, ahịrị nrụpụta ọhụrụ na-enwetaghị nzere ntozu nke Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO), ma ọ bụ igbu oge n'imecha mgbasawanye nrụpụta akwadoro nwere ike gbasaa oghere nchikota ihe karịrị ijeri abụọ n'ime oge a. Nkwalite doses nwere ike ịmepụta nrụgide ndị ọzọ na-achọsi ike n'ahịa.
A na-eji sirinji AD eme ọgwụ mgbochi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 70, mba 30 na-ejikwa ya maka ọgwụ mgbochi ụfọdụ. Kemgbe 1999, WHO, UNICEF, na United Nations Population Fund tụrụ aro ka a na-eji sirinji AD eme ihe n'ụwa niile maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka ha "na-ebute ihe ize ndụ kasị ala nke ibufe nje ndị na-ebute ọbara dị ka ịba ọcha n'anya B ma ọ bụ HIV" n'ihi na AD enweghị ike iwepụ ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọzọ.
N'ụzọ dị mkpa, sirinji AD niile na-enye usoro ọgwụgwọ a kapịrị ọnụ, nke pụtara na a ga-ejupụta na naanị otu ọnụọgụ ọgwụ mgbochi. A na-enye ọtụtụ ọgwụ mgbochi, gụnyere ndị maka ọtụtụ ọgwụ mgbochi ụmụaka, site na iji olu 0.5-mL yana sirinji AD dabara adaba. Ihe mgbochi ngwa ọgụ metụtara nnyefe AD sirinji amụbaala site na mmepe ọgwụ mgbochi na-agbanwe agbanwe, dị ka nnweta ọgwụ mgbochi Pfizer na nso nso a nke chọrọ ọpụrụiche dị ala nwụrụ anwụ 0.3-mL AD sirinji, nke emebeghị mbụ. Ogo sirinji ọhụrụ na-atụgharị ahịrị mmepụta site na imepụta sirinji AD ọkọlọtọ wee gbakwunye n'ihe ịma aka dị n'ikwekọ na ọgwụ mgbochi yana nha sirinji ziri ezi n'oge ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Usoro nwere ike imeju oghere iji mee ka ohere nweta ngwa ngwa, belata oge igbu oge, kwalite nchekwa, na iwulite ọkọnọ na-adigide gụnyere:
• Ịbawanye ikike mmepụta ihe site na itinye ego na mkpali iji wulite ọkọnọ na-adịgide adịgide na ibelata oge mbupu: Ndị na-enye onyinye, ndị na-etinye ego na gọọmentị nwere ike ịdọrọ na ngwá ọrụ eji agba ndị na-ebu ọgwụ mgbochi ume, gụnyere onyinye, ego mgbazinye ego ọ bụla ma ọ bụ obere ọmụrụ nwa, na nkwa olu. mebie ụfọdụ ihe ize ndụ nye ndị na-ebubata ya. Ọ dị mkpa karịsịa ịgbasa mmepụta sirinji mpaghara na Africa na Latin America, ebe enwere obere ọkọnọ na oge mbupu ogologo maka mbupu esenidụt.
• Nyochaa ọnọdụ ojiji: Ruo mgbe a ga-edozi ụkọ sirinji AD, mba ndị nwere ike iji ụdị sirinji nchekwa ndị ọzọ nwere ike inye aka chekwaa nnyefe AD sirinji maka mba ndị nwere sistemu ahụike amachibidoro.
• Hazie mpịakọta ọgwụ mgbochi: Ọ bụrụ na ndị na-emepụta ọgwụ mgbochi ga-emepụta ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ, ihe na-akwalite, na usoro ụmụaka iji kwekọọ n'ụdị sirinji AD dị adị, ọ ga-emezi ngwa ngwa, nrụpụta na ịgba ọgwụ mgbochi.
• Zenarị mmachi mbupụ nke mba nke na-ebelata oke ọkọnọ: Mba ndị nwere ikike imepụta sirinji nwere ike inye aka dozie oghere ọkọnọ zuru ụwa ọnụ iji mezuo ebumnuche ọgwụ mgbochi 70.
PATH ga-aga n'ihu na-enyocha ahịa ahụ, yana mmelite a na-atụ anya na data na 2022 ma ọ bụrụ na enwere mgbanwe dị ukwuu. Nlebanya PATH gara aga ewepụtara na Disemba 2020 chọpụtara ihe egwu dị mkpa, gụnyere ejighị n'aka chọrọ yana oge, ngwa ngwa mbupu, na mmachi ụlọ nkwakọba ihe.